किर्तिपुरः मेयर भर्सेज विद्यार्थी – Sidha Patra
मेयर रमेश महर्जनले विद्यार्थी हेमराज थापासँग पूर्वाग्रही राख्नुपर्ने कारण के होला ? एउटा विद्यार्थीको कोठा छापा हानेर पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने किन रहेछ ? पत्रकारले पनि समाचार लेख्नुपर्ने ? सारा अच्चमित छन् । थापा आफैले संकलन गरेको त्यतिधेरै राहत आफू एक्लैले त खाएनन् होला ? सबैले हेमराज थापाले दिएको राहत भन्दै हिड्छन्, चुह्लो बाल्छन् । उनको गुनगान गाउँछन् । थापालाई विद्यार्थीहरू नेता भनेर होइन, प्रिय साथी भनेर चिन्छन् । विद्यार्थीको सानो समस्यालाई पनि आफ्नै समस्याझैँ सम्झिन्छन् । र, विद्यार्थीहरूको भोको पेट भरिदिनु पाप त होइन होला ? भोकाएकालाई खाना दिनु, तिर्खाएकालाई पानी दिनु पाप त होइन । उनलेभन्दा कयौँ गुणा बढी राहत संकलन र वितरण गर्ने अन्य विद्यार्थी संघ, संगठनका नेता, कार्यकर्ताहरू माथि पूर्णरुपमा छुट छ । नियम, कानुन त सर्बोपरी हो । किन हेमराज थापालाई जस्तै गरेर उनीहरूलाई लगाम लागेन ? उहीँ माथि किन गिद्धे नजर लगाउँनु परेको हो ? पुलिस, प्रशासन उनको पिछा गर्दै दिनहुँ गस्तीमा किन धाउँछ ? नगरपालिका, मेयर जस्ता सरकारका अंग र सदस्यले त्यो बबुरो विद्यार्थीमाथि के गरेको हो ?
यसरी कडाईकासाथ निगरानी गर्नै खोजेको हो भने त्रि.वि. र कीर्तिपुर नगरहाताभित्र राहत संकलन गर्ने र वितरण गर्नेको घर, कोठा, चोटा प्रहरीले छापा मार्न सक्नुपर्यो । हैन भने दुरका भोका विद्यार्थीहरूमाथि लात हान्नु किमार्थ राम्रो होइन । सरकार हेमराज थापा तिम्रै सन्तान हो, ‘पाले पुन्य, मारे पाप लाग्ला ।’